Akụkọ - Ihe mkpuchi maka ike ike anyanwụ nke nwere ike dochie silicon
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike iji ụfọdụ ụdị mkpuchi "anwansi" dochie "silicon" na ike ike anyanwụ.Ọ bụrụ na ọ kụrụ n'ahịa, ọ nwere ike belata ọnụahịa nke ike anyanwụ ma weta teknụzụ ahụ kwa ụbọchị.
N'iji ogwe igwe mee ka nchacha nke anyanwụ, na site na nsonye fotovolt, radieshon nke ụzarị anyanwụ nwere ike ịtụgharị n'ime ike eletriki - nke a na-akpọkarị ọgbọ nke ike anyanwụ, nke na-ezo aka na mbara igwe nke ihe bụ isi bụ " sịlịkọn ”.Ọ bụ naanị n’ihi ụgwọ dị elu nke iji sịlịkọn eme ka ike anyanwụ anaghị abụ ụdị eji ọkụ eletrik eme ihe.
Ma ugbu a, e mepụtala ụdị mkpuchi "anwansi" na mba ọzọ iji dochie "silicon" maka ike ike anyanwụ.Ọ bụrụ na ọ kụrụ n'ahịa, ọ nwere ike belata ọnụahịa nke ike anyanwụ ma weta teknụzụ ahụ kwa ụbọchị.
A na-eji ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi dị ka ihe na-acha pigmenti
Otu ụlọ ọrụ nyocha na ngalaba ikike Solar bụ MIB-Solar Institute na Mahadum nke Milan Bicocca, Italy, nke na-anwale ugbua mkpuchi maka ike Solar akpọ DSC Teknụzụ.
DSC Technology Ihe bụ isi nke mkpuchi ike anyanwụ bụ iji chlorophyll photosynthesis. jiri ihe ọ juiceụ juiceụ nke ụdị mkpụrụ osisi niile rụọ ọrụ, chere dị ka ihe ọ juiceụ juiceụ nke ihe ọ blueụ blueụ bluuberi, raspberị, mkpụrụ vaịn na-acha ọbara ọbara. Agba ndị kwesịrị ekwesị maka agba bụ ọbara ọbara na-acha odo odo.
Mbara anyanwụ nke na-aga na mkpuchi dịkwa iche. Ọ na-eji igwe obibi akwụkwọ pụrụ iche iji bipụta nanoscale titanium oxide na ndebiri, nke a na-emikpu ya na agba agba maka awa 24. Mgbe mkpuchi ahụ dị na titanium oxide, a na-eme mkpụrụ ndụ anyanwụ.
Ego, adaba, mana adighi ike
Ọ bụ ihe dị mfe iji wụnye.N'omume anyị na-ahụ oghere ndị edobere na elu igwe, n'elu ụlọ, naanị akụkụ nke elu ụlọ, mana enwere ike itinye agba ọhụrụ ahụ n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ, gụnyere iko, yabụ ọ bụ karịa kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ọfịs. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụdị mpụga nke ụdị ụlọ ọhụrụ dị ogologo dị n'akụkụ ụwa niile dabara maka ụdị mkpuchi ike anyanwụ. Were ụlọ UniCredit na Milan dị ka ihe atụ. Mgbidi ya nke mpụga na-eburu ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mpaghara ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na ejiri ya kpuchie agba agba ọgbọ nke ike anyanwụ, ọ na-efu oke ego site na echiche nke ịchekwa ike.
N'ihe banyere ọnụahịa, agba maka ike ọkụ na-enyekwa "akụ na ụba" karịa ogwe ọkụ. Mkpuchi mkpuchi ike na-efu otu ụzọ n'ụzọ ise dịka silicon, isi ihe maka oghere ndị dị na mbara igwe. Ihe mejupụtara ya bụ agba organic na titanium oxide, ha abụọ dị ọnụ ala ma mepụta ọtụtụ.
Uru nke mkpuchi ahụ abụghị naanị na ọ dị ọnụ ala, kamakwa na ọ nwere ike gbanwee gburugburu ebe obibi karịa ogwe osisi "silicon". Ọ na-arụ ọrụ na ihu igwe na-adịghị mma ma ọ bụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị, dịka oke mmiri ma ọ bụ na chi ọbụbọ ma ọ bụ mgbede.
O doro anya na ụdị mkpuchi nke ike anyanwụ a nwekwara adịghị ike, nke anaghị adịte aka dị ka bọọdụ "silicon", na arụmọrụ absorption dị ala. Ogwe igwe na-adịkarị ndụ afọ 25, ndị nyocha kwuru. N'ezie, ọtụtụ nke ihe omuma ike nke anyanwụ nke arụnyere 30-40 afọ gara aga ka dị taa, ebe ndụ imewe nke agba ike anyanwụ bụ naanị afọ 10-15; Ogwe igwe na-arụ ọrụ pasent 15 nke ọma, na mkpuchi mkpuchi na-emepụta ọkụ eletrik dị ihe dị ka ọkara ka ọrụ, na ihe dị ka 7 percent.